Diinta-Aqoon Archives ·
Category Archives: Diinta-Aqoon Casharkii 12aad Habka Cilmi-Baarista (Research Method) Doorashada Horojogaha Cilmi-barista (Selecting a Supervisor) Ardayga diyaarinayo buuga qalin jabinta waxaa uu u baahanyahay cid hagta oo qibrad u leh cilmi-baarista iyo madadda uu wax ka qorayo.
Casharkii 11aad Habka Cilmi Baarista (Research Method) Su’alaha Cilmi-baarista (Research Questions) Marka la qoraayo su’aalaha cilmi-baarista micnaheedu waxaa uu yahay waxaad haysaa wax aad daraasad ku samayso. ...
Casharkii 10aad Habka Cilmi Baarista (Research Method) Su’aalaha cilmi baarista waxay laf dhabar u yihiin daraasadda. Waxaa haboon in si khoto dheer looga fakaro, maxaayeelay hadii su’aalaha cilmi-baarista ay khaldamaan waxay keeni kartaa in ay daraasada dhami wada khaldanto. Dhinaca kale, su’aalaha cilmi-baarista ee looraadinaayo jawaabta, waxay ka caawinayaan aqristaha in uu wax badan ka ogaado mowduuca. Qaar... Casharkii 9aad Habka Cilmi Baarista (Research Method) September 15 (Jowhar)— Tusaaloyin Bayaanka Dhibaatada: Waxaa jiro habab badan oo loo qoro bayaanka dhibaatada. Hadafka laga leeyahay bayaanka dhibaatada waxaa uu yahay in dhibaatada guud laga dhaxdoorto dhibaatada gaarka ah ee u baahan in goor hore wax laga qabto. ...
Fadliga tobanka Thul xijah iyo Acmaasha wanaagsan maalmahaa Maalmahaa fadliga badan waxaa ka mid ah tobanka thul xajah oo ay fadliga ay leedahay aayado quraan ah iyo axaadiista nabigeenii Muxamed SCW ay cadeeyeen: